नेकपा बिभाजन हुँनै लागेको हो त ? – Kadar News : Oneline Digital News:
नेकपा बिभाजन हुँनै लागेको हो त ?
प्रकासित : २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार १०:४०
‘राष्ट्रपति– झलनाथ खनाल
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरूद्ध दाहाल, खनाल, नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको मोर्चाबन्दी ।
त्यतिमात्र होइन, उनी नेकपा प्रचार प्रसार विभागका उपप्रमुख पनि हुन् । त्यसैले उनीबाट सार्वजनिक यो सूचनालाई प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपाको तर्फबाट आधिकारिक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने उनी दुईवटा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा यो चर्चा ल्याउँदा ‘यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो’ भनि उल्लेख गरेका छैनन् । त्यसैले यसलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै सार्वजनिक भएको आधिकारिक सूचना मान्नुपर्ने विश्लेषकहरुको बुझाइ
‘पार्टीको निर्णय नमान्ने भन्नुको अर्थ के हो ? एकता नचाहेको
होइन ?’ प्रचण्डले प्रश्न गरे । उनका अनुसार सचिवालयमा एउटा निर्णय हुन्छ तर दुई घण्टापछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई मान्दिनँ भनि प्रतिक्रिया दिन्छन् । त्यसको अर्थ एकता नचाहेको स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र श्रेष्ठले पत्रकारसँग छलफल गरेको एकघण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग हुने छलफल ‘क्यान्सिल’ गरे । उनले आफ्ना प्रेस सल्लाहकार थापामार्फत प्रचण्डसँगको छलफल ‘क्यान्सिल’ भएको सार्वजनिक
गराए । थापाले अध्यक्षद्वयबीच बुधबार साँझ हुने भनिएको छलफल स्थगित गरिएको जानकारी फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरे ।